Canshuurta Qasa oo badatay - BBC Somali
Canshuurta Qasa oo badatay
Image caption Xamaas oo maamusha Qasa ayaa kordhisay canshuurta labadii sano ee ugu danbeeyay.
Isagoo ku jira baqaarkiisa wayn oo aan wax badan ku jirin, Hamam al Yazjji ayaa la halgamaya inuu ganacsigiisa wado.
Ma aha oo kaliya dhibka maalin laha in lacag sameeyo magaalada Qasa inuu la halgamayo, laakiin canshuurta badan ee ay ku soo rogeen kooxda Islaamiyiinta ee Xamaas, oo maamusho Qasa.
Image caption Hamam al Yazjji ayay dhib ku noqotay inuu sameeyo faa'iido iyadoo laga qaado saddex canshuur.
Xamaas ayaa dhawaan kordhisay anshuurta, ka dib markii ay hoos u dhacday lacagtii ka soo galaysay saaxiibadood sida Iran, ururka Aqwaan Muslimiin iyo jidadka ay isticmaalayeen dhulka hoostiisa ee Masar ka imanayay oo la burburiyay.
"Waxaan ka soo dhoofsan cunto aad u badan caalamka oo dhan, laakiin labadii sano ee ugu danbaysay Xamaas ayaa adkaysay sidii faa'iido loo samayn lahaa, sababtoo ah canshuurta badan ee ay saartayalaabada", ayuu sheegay Mr Yazjji, oo degan waqooyiga Qasa.
Image caption Masar ayaa burburisay jidad dhulka hoostiisa oo Qasa ay alaabada ka soo gashan jirtay markii laga xiray xudduuda.
Macaamiisha iyo ganacsatada Qasa ayaa saddex goor lagu kordhiyay canshuur.
Israel ayaa ka qaada canshuur alaabada Qasa iyo Daanta Galbeed la keeno iyadoo ku wareejinaysa lacagta dowladda Falastiiniyiinta ee Fatax ka dib markii ay ka jarto lacag yar.
"Waxaan ka bixinaa saddex canshuur alaabada aan soo dhoofino, mid Israel qaado, mid dowladda Falastiiniyiinta qaado iyo mid Xamaas ay qaado", ayuu sheegay Mr Yazjji.
Sida uu sheegay sarkaal ka tirsan wasaarada maaliyada ee Xamaas Youssif al Kayali, Xamaas ayaa aruurisay $15 milyan oo canshuur ah bishii.